श्रीमती रिसाइन्? पढनुस् फकाउने ५ सुपर तरिका - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमती रिसाइन्? पढनुस् फकाउने ५ सुपर तरिका
काठमाडौंः सम्बन्ध जतिसुकै मजबुत भएता पनि कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुन्छ । यस्ता मनमुटावहरु छोटो समयको लागि भएमा सम्बन्धमा मिठास आउँछ तर लामो समयको लागि भयो भने त्यसले पारिवारिक सम्बन्धनै धरापमा पर्छ । कतिपय अवस्थामा श्रीमतीहरु यसरी रिसाइदिन्छन् की श्रीमानलाई फकाउनै हम्मेहम्मे पर्छ ।
कसरी पार्ने त श्रीमतीको रिसलाई शान्त ?
रिसाउनुको कारणः- श्रीमती रिसमा छिन् भने सवैभन्दा पहिला आफुले केहि गल्ति गरेको छु की भनी आत्ममुल्याङ्कन गर्नुहोस् । आफ्नो केहि पनि गल्ती नभएमा रिसाउनुको कारण सोध्नुहोस् । यति श्रीमानकै गल्ती छ भने सरी भन्नुहोस् र रिस शान्त भएपछि सबै कुरा सम्झाउनुहोस् ।
नदेखे झैँ गर्नुः- श्रीमतीको रिस शान्त पार्नको लागि कहिलेकाँही उसलाई इग्नोर गर्नुहोस् । यसबाट उसको रिस चाँडै शान्त हुनुको साथै आफुले गरेको गल्तीको महसुस पनि छिट्टै हुन्छ । तर यो कुरापनि एकदमै सुझबुझ तरिकाले गर्नुपर्छ नत्र श्रीमती भड्किन सक्छिन् ।
बच्चाको मद्धतः- श्रीमती रिसाएको बेलामा बच्चाको मद्धतले उनलाई फकाउन सकिन्छ । श्रीमती रिसमा छिन् भने श्रीमतीलाई दिने समय पनि बच्चालाई दिनुहोस् र खेल्न थाल्नुहोस् । त्यति हुनेबित्तिकै श्रीमतीले एक्लै भएको महसुस गर्छिन् र हल्का भएपनि रिस शान्त हुन्छ । बच्चा र श्रीमतीको साथमा कतै घुम्न गएपनि उनीहरु एकदमै खुसी हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस दुई श्रीमती हुँदाहुँदै अर्काकी पत्नी लिएर वडाध्यक्ष फरार
समय व्यवस्थापनः- श्रीमतीको मुड ठिक पार्नको लागि उनलाई समय दिनुहोस् । धेरैजसो श्रीमतीहरु श्रीमानले पर्याप्त समय नदिएको भन्दै रिसाइरहेका हुन्छन् । तर याद गर्नुहोस् श्रीमतीलाई दिएको समय एकदमै सुन्दर हुनु जरुरी छ । त्यो समयमा अफिस, साथी वा अन्य परिवारको बारेमा कुरै नगर्नुहोस् । सकिन्छ भने फोनको प्रयोग समेत नगर्नुहोस् ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमतीको कुटाइबाट श्रीमानको मृत्यु
आरामः- दिनभरी परिवारको हेरचाह वा अफिसको काम गर्नु कुनै सजिलो काम होइन । त्यसैले यदि घर सम्हालेकी पत्नी छिन् भने कहिलेकाहीँ घरको कामहरु आफैँले गरेर उनलाई आराम दिनुहोस् । सबैलाई खुसी पार्ने चक्करमा श्रीमतीहरु एकदमै ब्यस्त र थकित हुने गर्छन् ।
ट्याग्स: परिवार, रिस, श्रीमति, श्रीमती